गरिमा बिकाश बैकंको ७३ औ शाखा हेमजामा – Samacharpati
गरिमा बिकाश बैकंको ७३ औ शाखा हेमजामा
हेमजा, २९ जेठ । ७३ औ शाखाको रुपमा स्थापना भएको गरिमा बिकाश बैकं लि. हेमजा शाखाको एक कार्यक्रममका बिच बुधबार उद्घाटन भएको् छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथी नेपाल राष्ट्र बैकं क्षत्रीय कार्यलय पोखरा प्रमुख डा. डिल्लिराम पोखरेलले बैकंको सफल्ताको शुभकामना ब्यक्त गर्दै परिणाम भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सोहि अबसरमा बैंकिंग क्षेत्रको गतिबिधि प्रस्तुत गरेका थिए ।
आवाज डा. डिल्लिराम पोखरेल
गरिमा बिकाश बैक लि.का सञ्चालक समिति सलस्य डा. आनन्द श्रेष्ठले धन्यवाल ज्ञापन गरेको कार्यक्रममा वडा न. २५ का वडा अध्यक्ष सोभाखर तिमिल्सिना र महिला सञ्जाल पोखरा २५ की अध्यक्ष रमा त्रिपाठी लगाएतले सफल्ताको शुभकामना ब्यक्त गरेका थिए ।
उक्त अबसरमा देबिस्थान भजन समुहका अध्यक्ष भरतचन्द्र गौतमले कबिता बाचन गरेका थिए । सस्थाका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वगत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले र सञ्चालन शाखा प्रमुख शंकर राज सापकोटाले गरेका थिए ।
काठमाडौँमा गुफापोखरी समाजको गठन
रोटरी किड्नी केयर सेन्टर शिलान्यास
होटल संघद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण